ANAGA – SSUP
Xisbiga Midnimada Bulshada Soomaaliyeed SSUP waxaa aasaasay waxgaradka wadaniyiinta Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta taariikhdu markey aheyd April 11, 2004 oo lagu aasaasay Katrinholm, Sweden.
Waa xisbi siyaasadeed, oo aaminsan in mabaadi’da wada hadalka, doorashooyin xor ah, awood qaybsiga, sinaanta, cadaalada, xoriyada hadalka iyo horumarinta sharafta ummadda Soomaaliyeed iyadoo aan fara gelin lagu sameeyn qiimaha dhaqanka oo ay ka mid tahay diinta.
Soomalaay masuul iyo mudanahii la doortaba
Hadaad maya tiraahdaan
Mehradiisa gaarka ah
Ma maali`ig soctaa madax looga dhigayaa
GUDOOMIYAHA XISBIGA YASSIN MAHI
Gudoomiye Yassin Mahi Mallin waxa uu howlo badan oo bulshad Somaliyeed muhiim u ah kasoo qabtay gudaha dalka sidoo kalena gudoomiyuhu wuxuu had iyo jeer taakuleyn dhankasta ah la garab taagnaa dadka Somaliyeed ee qurbaha usoo haajiray iyo kuwa gudaha ku dhibaateysan hadey ahaan laheyd kaalmo waxbarasho mid dhaqaale iyo taba bar intaba. Yassin waxa uu qibrad dheer uleeyahay siyaasada caalamiga asagoo qabsan jagooyin muhiim ah inta uu ku dhaqnaa dalka Sweden haatana waxa uu kamid yahay baarlamaanka dalka Sweden,
Yassin waxa uu ku caanbaxay muwaadinimo isagoo qoray buugaag tiro badan oo uu uga faalooday siyaasada cakiran ee dalkeena hooyo. Waxaa kaloo xusid mudan in Yassin uu ahaa laacib kooxda Banadir ee Kubada Kolayga ama Baskitka. Waxa uu marwalba ka shaqeeyaa sidii xal waara loogu heli lahaa arimaha Somaliya.
Ninaad Kaluun siisay hal maalin ayaad badbaadisay laakiin hadii aad barto sida loo kaluumeysto noloshiisa inta kadhiman ayaad badbaadisay. – Yassin Mahi Mallin
Nin xilqaaday eed qaad. runti masuuliyada saaran xukuumada iyo dhamaanba madaxda dalka waxaa dhacda in lagu tagri falo masuuliyadi iyo xilki loo dhiibtay hadaba maadaama ay taasi caan ka noqotay Africa iyo dalal badan oo carabaha iyo Asia ah waxay na dhaxal siisay casharo iyo qibrad marka aanu ubarbar dhignay hab dhaqanka reer galbeedku maanta ku adeegtaan ee ay ku yareeyeen ama ay gabi ahaanba kaga hortageen in masuul uu ku tagri falo masuuliyadii loo dhiibtay waxaanan ognahay hir galinta nidaam adag oo sharci ah oo looga hortagaayo ku tagri falka masuuliyada iyo hantida dalka ayaa looga bixi karaa caqabadan iyadoo xisbiga SSUP uu kadiyaariyay shuruuc adkeyn doonta ku tagri falka guud ahaanba danaha dalka iyo shacabka.
Waxaa jiri doona laxisaabtan guud ahaan masuuliyiinta, wasaaradaha, waaxyaha dowlada si loo ciribtiro musuq maasuqa daba dheeraadaya ee aafeeyay dhaqaalaha dalka iyo soo kabashada dalka oo noqday caqabad joogto ah islamarkaana keena fashil iyo wax qabad yari xaga xukuumida ah. iyadoo taasna looga bixi karo laxisaabtan dhab ah.
in dib u heshiisiin ladhexdhigo umada Somaliyeed guud gobol iyo tuulo meel walba oo dalka kajoogaan loona fududeeyo qabsoomida kulamo isu soo dhaweyn ah oo dowlada kaabeyso islamarkaana laga shaqeeyo sidii xal looga gaari lahaa caqabad walba oo soo wajahda dib u dhayida waxa umada kala tabaneyso.
in loogu adeego dhamaan muwaadiniinta si siman, iyadoo aan loo eegin awoodda, jinsiyad, rag ama dumar, lahjad, jufo ama qabiil